असमान समाजको निर्माण
३ पुष २०७४, सोमबार १३:३२
अमेरिकी असमानता यत्तिकै भएको होइन । अमेरिकी असमानताको त सिर्जना गरिएको हो । बजारको प्रभावका कारण पनि असमानता सिर्जना भएको हो । तर, बजारको प्रभाव मात्र पनि असमान समाज निर्माणको एकल कारण होइन । एउटा अर्थमा, यो स्वाभाविक पनि हो । किनकि, आर्थिक नीतिहरु विश्वभर एउटै हुन्छन् । तर, अमेरिकी समाजमा बढ्दो असमानता.....
नेपालमा उद्योगलाई खनिज, सेवा, पर्यटन, कृषि तथा वन, निर्माण, ऊर्जामूलक र उत्पादनमूलक गरी सातप्रकारमा विभाजन गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगभन्नाले तिनलाई जनाउँछ, जसले कच्चापदार्थ, प्रशोधित तथा उत्पादित वस्तुको संरचना परिवर्तन गरेर नयाँ आकार दिन्छन्, नयाँ वस्तुको उत्पादन गर्छन् । नेपालको उत्पादनमूलक उद्योगको.....
सङ्घीयतामा आर्थिक चुनौती
२६ मंसिर २०७४, मंगलवार ११:५५
आर्थिक सङ्घीयतामा खासगरी चारओटा पक्ष हुन्छन् । यसमध्ये पहिलो पक्ष अधिकारको बाँडफाँट हो । संविधानले तीन तहका सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यसैगरी योसँग सम्बन्धित केही ऐन पनि आएका छन् । त्यसले केही न केही सहयोग पक्कै पनि गरेको छ । तर, त्यसमा खासगरी हालसम्म प्रदेश र प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुन नबनिसकेका.....
रुपान्तरणको चरणमा बिमा बजार
२५ मंसिर २०७४, सोमबार १०:४७
वित्तीय पहुँचजस्तै बिमा पहँुचका लागि पनि नियामक निकाय बिमा समितिले यसका लागि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । बिमा कम्पनीहरुले पनि बिमाको पहुँच बढाउने सम्बन्धमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नियामक र बजार सञ्चालक तथा सरकारको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै बिमाको पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ । अहिले उपलब्ध आँकडाअनुसार नेपालको.....
२४ मंसिर २०७४, आईतवार १०:३१
विकास प्रक्रियाको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई आधार मान्दा अर्थतन्त्रको विकास प्रक्रियामा सामान्यतया ः संरचनागत परिवर्तन हुन्छ । विकासको प्रारम्भिक चरणमा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो योगदान हुन्छ र विकास प्रक्रिया अघि बढ्ढै जाँदा कृषिलाई उद्योगले र अन्त्यमा उद्योगलाई सेवा क्षेत्रले प्रतिस्थापित.....
कर्मचारी निर्वाचनमा, विकास खर्च न्यून
२१ मंसिर २०७४, बिहीबार १०:५१
चालू आर्थिक वर्षमा देशको विकास–निर्माण पूर्ण रुपमा ठप्पैजस्तो हुने भएको छ । यसै वर्ष सरकारले लगातार तीनओटा प्रमुख निर्वाचन सम्पन्न गर्न लागेकाले त्यसको प्रभाव देशको विकास प्रक्रियामा पर्ने निश्चित छ । देशको सम्पूर्ण प्रशासनतन्त्र विगत ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि निर्वाचनमै परिचालित छ । त्यसै पनि देशको.....
के हो खुला अर्थतन्त्र ?
१८ मंसिर २०७४, सोमबार १०:२३
वास्तवमा ‘खुलापन’ शब्दका दुई अर्थ छन्, जुन एकापसमा सम्बन्धित लाग्छन् । तर, तिनको अर्थ फरक छ । खुलापनको अर्थ कुनै पनि कुरा प्रतिबन्धित नभएको अथवा सहज पहुँचमा भएको बुझ्न पनि सकिन्छ र अर्कोतिर एक व्यक्ति वा संस्था पारदर्शी भएको पनि बुझिन्छ । पहिलो अर्थ व्यापार, लगानी तथा प्रविधिका विषयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ,.....
सङ्घीयतामा आर्थिक अनुशासन र जवाफदेहिता
१७ मंसिर २०७४, आईतवार १५:२७
स्थानीय तह सङ्घीय संरचनामा अधिकारसम्पन्न र बलिया भएका छन् । तर यो मेसोमा एउटा आधारभूत संवैधानिक त्रुटि पनि छ । करको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार दोहोरो कर असुल गर्न पाइँदैन । तर, संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई समान शीर्षकमा कर उठाउने अधिकार दिएको छ । यसमा दोहोरोपन ‘डुब्लिकेसन’ हुन सक्ने डर छ । मनोरञ्जन,.....
सङ्घीयतामा वित्त व्यवस्थापन
१५ मंसिर २०७४, शुक्रबार १५:१८
सङ्घीयता आफैँमा जटिल व्यवस्था हो । यसमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र तीन तहका सरकार हुन्छन् । तीनओटै सरकार संविधान प्रदत्त अधिकार लिएर खडा भएका हुन्छन् । अरू देशको भन्दा हाम्रो देशको सङ्घीयता विशेष प्रकृतिको छ । अरू देशमा केन्द्र र प्रदेशबीच मात्र अधिकार बाँडफाँड हुने व्यवस्था छ । ती देशमा सङ्घ र प्रदेशबीच.....
निजी क्षेत्रले जति गर्यो, त्यसको तुलनामा राज्यले कति गर्यो ?
१३ मंसिर २०७४, बुधबार २०:१६
राज्यले २०४६ सालको परिवर्तनपछि गरेको एउटा मात्रै काम भनेको उदार अर्थनीति हो । त्यही उदारनीतिका कारण आज निजीक्षेत्रका तर्फबाट यति ठूलो लगानी भएको छ । नयाँनयाँ परियोजनाको पहिचान गरेर त्यसका लागि आवश्यक लगानी जुटाउने काम निजीक्षेत्रले गरेको छ । निजीक्षेत्रले यत्रो काम गर्दा यो अवधिमा राज्यबाट के के काम.....